२०७८ सावन, १३
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलवार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको खोटाङ खण्ड निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले उनीसहित योजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र इन्जिनियरविरुद्ध रु. ६८ लाख ९३ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
उक्त राजमार्गको चेनेज ४२+०० देखि ८८+५०० खण्ड निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार नगरेको र एउटै चेनेजमा दुईओटा ठेक्का गरेर भुक्तानी लिने दिने गरेको भन्दै आयोगले महासंघका अध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सिंह, तत्कालीन योजना प्रमुख विजय चापागाईं, इन्जिनियर दीपककुमार खड्का, सबइन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद राउतविरुद्ध उक्त रकम मागदाबी गरेको छ ।
लेखा अधिकृत फुँयालविरुद्ध भने रु. २१ लख ४९ हजारको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सजाय गरी बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ । उक्त राजमार्गमा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार तथा अनियमतिता गरेको पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त ठेक्कामा निर्माणस्थलमा भएको कामको वास्तविक अवस्था उल्लेख नगरी भेरिएसन हुनपर्ने भन्दा फरक ब्यहोराको भेरिएसन पेश गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार भेरिएसन नगराई इष्टिमेट विपरीत विना कुनै निर्णय फिल्डमा काम गरे/गराएको पुष्टि भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उस्तै प्रकृतिको कामको बिल तयार पारी उक्त रकम हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ वमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ ।